Angela - Mivavaha ho an'ny Vicar - Countdown to the Kingdom
Angela - Mivavaha ho an'ny Vicar
Zanak'i Zaro izahay	Angela	tamin'ny 8 jona 2020:
Io takariva io dia niseho nitafy akanjo fotsy avokoa i Neny; fotsy ny lambam-paty nanodidina azy, tena tsara, voasarona ary mitovy amin'ny mamirapiratra. I Neny dia nalahelo tarehy sy maso feno ranomaso. Teo amin'ny tratrany dia nisy fon'ny nofo nosatrohana tsilo ary nisokatra ny sandriny ho famantarana fandraisana. Eo amin'ny tanany havanana dia manana felana fotsy lava izy, toy ny jiro; eo an-tanany havia dia raozy fotsy lehibe izay nandatsaka tsimoramora ny volon-tanany saingy tsy resy ny hatsarany. Nisaina ny tongony ary napetraka teto ambonin'izao tontolo izao.
Ry zanaka malala, tonga at I aminareo aho anio hariva ho renin'ny Fitiavan'Andriamanitra.
Ry zanako malala, manasa anao aho izao ho tonga tahaka ny zaza: manetre tena sy madio ary miaina ao amin'ny miafina. Anaka, mijery anao am-pitiavana aho ary manasa anao aho hanatona sakramenta bebe kokoa [matetika]: miaiky matetika ary mianatra manao ny sitrapon'Andriamanitra, na dia miezaka mafy anao aza izy. Anaka, anio hariva dia manasa anao indray aho hivavaka bebe kokoa ho an'ny Fiangonana malalako, mivavaha be ho an'ilay Tompon'i Kristy. Tsy maintsy miatrika fitsapana sy fahoriana ny Fiangonana, ary miaraka aminy koa, ny vahoakan'Andriamanitra manontolo. Ry zanako malala isany, aza matahotra ary aza matahotra: eto aho hanampy anao, eto aho hametraka anareo rehetra ao anatin'ny foko tsy mahafaty ahy. Tohizo ny famolavolana vavaky ny vavaka; aza maty ho reraka, ho fanilo fitiavana. Tiavo sy mivavaha ho an'izay mbola tsy mahalala ny fitiavan'Andriamanitra. Mivavaha ho an'ny fiovam-pon'ny zanak'olombelona ary hibebaka. Mianara manao sorona ary mandoto tena: amin'ny fanetren-tena ihany no azonao atao tahaka ny zaza; ajanonao ny sandriko ary avelao ho voafandrin'ny fitiavako ianareo.
Avy eo dia nangataka ahy hivavaka aminy i Neny ary nanome ny tsodrano azy izy.
Posted in Simona sy Angela.
← Andinin-tsoratra masina - Momba ny fifampiraharahana
Pedro Regis - Arovy ny Eokaristia →